UBenni ushayela iqembu lakhe ihlombe ngomdlalo omuhle | Scrolla Izindaba
UBenni ushayela iqembu lakhe ihlombe ngomdlalo omuhle
Umqeqeshi waMaZulu, uBenni McCarthy, uhalalisele abadlali bakhe ngesimo sabo sokungapheli mandla esivele sabenza babuthe ingcindezi emaqenjini ahamba phambili ku-DStv Premiership.
Ukunqoba koSuthu ngamagoli amabili eqandeni ludlala ne-Tshakhuma Tsha Madzivhandila kubenze baqinisa indawo yabo yesishiyagalombili.
“Abadlali basebenze ngokuzikhandla ekuziqeqesheni futhi kuhle ukubabona bethola imiphumela emihle. Ngiyabahalalisela ngalokho. La maphuzu asisa ebangeni elithinta amaqembu ahamba phambili,” kusho uMacCarthy.
Njengawo wonke amaqembu aku-DStv Premiership, Usuthu luzophumula kule mpelasonto. Le khefu izobona amaqembu esizwe elwela ukuzama nokuhlungela i-Africa Cup of Nations ese-Cameroon.
UMcCarthy akazange ajabule ngekhefu.
“Ikhefu lizosiphazamisa. Besifuna ukuqhubeka nokudlala futhi sithole amaphuzu,” esho.
Ifomu yakamuva yoSuthu iyibona isendaweni yesihlanu ku-log, isethubeni lokuthi iqede ibanga lamaqembu aphezulu ayisishiyagalombili.
Ukwehlulwa akuyisizanga ngalutho i-Tshakhuma. Basendaweni yesibili ukusuka phansi ngamaphuzu amabili nje ngaphambi kwe-Black Leopards egxile ezansi.
Ukunqoba kwaMazulu idlala ne-Tshakhuma kwehlise ingcindezi komakhelwane babo abakude i-Maritzburg United.
I-Team of Choice ibisendaweni yesithathu ukusuka phansi kanti i-Tshakhuma ibisezithendeni zayo ngaphambi komdlalo wayo naMazulu. I-United nayo izisizile ngokushaya i-TS Galaxy ngempelasonto.
I-United izoya ekhefini le-FIFA imamatheka yazi ukuthi ingakugwema ukwehliselwa phansi.
Umthombo wesithombe: @soccerladuma